Displaying items by tag: japan - Myanmar Automobile and Equipment Directory
Saturday, 23 November 2019 14:08
ရှေ့မီးကြီးနဲ့ ရှဲလ်ကို Honda Fit ကနေယူသုံးထားပေမယ့် ရုပ်ဆိုးကြီးလို့သတ်မှတ်ခံနေရတဲ့ 2020 Honda Fit Hybrid
ဂျပန်နိုင်ငံအခြေစိုက် Honda အနေနဲ့ Tokyo Motor Show မှာ ၂၀၂၀မော်ဒယ် ရုပ်ပြောင်းဖြစ်တဲ့ Honda Fit ကိုမိတ် ဆက်ပြသခဲ့ပါတယ်။ ထူးခြားမှုကတော့ hybrid အမျိုးအစားကို အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပြသပေးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
Friday, 08 November 2019 09:17
Toyota Alphard ရဲ့ grade ခွဲများအကြောင်း
TOYOTA ရဲ့ MPV အမျိုးအစားမှာ အ​ရောင်​ရဆုံး ဘုရင်​တပါးဖြစ်​တဲ့ Alphard ကို NAME PLATE ​လေးကြည့်​ရုံနဲ့ ကားရဲ့ GRADE သိရမဲ့အပြင်​ 2W လား ? 4W လား ?7​ယောက်​စီးလား ? 8 ​ယောက်​စီးလား ? စတာ​တွေကို သိနိုင်​မယ်​ဗျ။